Kungani thina - Buka i-Rapport
Lapha uzothola yonke imininingwane ebalulekile mayelana ne-Watch Rapport.
Uma ubhalisa, uzothola ukufinyelela kuhlu olubonakala kuphela kubasebenzisi be-Watch Rapport. Zuza ngokufinyelela okukhethekile kohlu okuvela kubathengisi abazimele izinsuku ezimbalwa ngemuva kokushicilelwa.
Ukuphepha okuphezulu kakhulu
Buka iRipport igcizelela kakhulu amazinga okuphepha aphezulu. Njengengxenye yomqondo wethu ophelele wokuphepha, siqinisekisa ukuthi yonke idatha engabasebenzisi ababhalisiwe beWatch Rapport ibethelwe ngesikhathi sokudluliswa.
Yenza intandokazi ukusesha kwakho nokufakwa kuhlu kwakho, futhi ungalokothi uphuthelwe ukufakwa kuhlu okuthakazelisayo. Gcina ukusesha okuningi njengoba ufuna ku-akhawunti yakho ye-Watch Rapport bese uthola izaziso mayelana nokufakwa kuhlu okusha.
I-Watch Rapport inikeza bonke abasebenzisi ababhalisiwe nokuthengiselana okuphelele ekugcineni kokuvikelwa komthengi. Akudingeki ukhathazeke ngokuphepha nokuvikeleka. Ungathenga iwashi lakho lamaphupho manje ngokuzethemba nangokuthula kwengqondo. Funda kabanzi lapha.
Ukuphuma okuphephile nokuvikelekile
I-Watch Rapport inikeza ukuphuma okuphephile nokuvikelekile kukho konke okwenziwayo emhlabeni jikelele. Abathengi nabathengisi bangagwema izinkinga ngokusebenzelana ngqo nePlatifomu ye-Watch Rapport ethembekile. Insizakalo yethu yamakhasimende esezingeni lomhlaba ezimweni eziningi izoxazulula noma yiziphi izinkinga ngokushesha. Imibuzo? xhumana nathi lapha.
Zero isikweletu sokuthenga
Bukela iRapport ime ngemuva kwenqubomgomo yokubuyisa imali yezinsuku ezingama-30. Uma unganelisekile ngokuthenga kwakho nganoma yisiphi isizathu, ungacela ukubuyiselwa imali bese uthola imali yakho. Ungafunda kabanzi ngenqubomgomo yethu yokubuyisa lapha.
Ukubuyiselwa kwamahhala okulula
Sinikeza inqubomgomo yokubuyisa yezinsuku ezingama-30 kuyo yonke imikhiqizo. Uma ungenelisekile ngokuthenga kwakho nganoma yisiphi isizathu, buyisela imali yakho emuva.
Iminyaka eyi-100 + isipiliyoni esihlanganisiwe kubucwebe namawashi.
Thenga futhi uthengise amawashi emhlabeni wonke